विदेशमा अमेरिकी सेनाका ६ सय शिविरले के फाईदा हुदैछ ? | katipath news
विदेशमा अमेरिकी सेनाका ६ सय शिविरले के फाईदा हुदैछ ?
करिब २० वर्ष युद्ध लडिसकेपछि अमेरिकी सेना अगस्ट २०२१ मा अफगानिस्तानबाट फिर्ता भयो। पछिल्ला वर्षहरुमा अफगानिस्तानबाहेक अन्य थुप्रै द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा अमेरिकाले आफ्नो सैन्य उपस्थिति घटाएको छ। २००७ मा इराकमा अमेरिकी सेनाको संख्या १ लाख ७० हजार थियो। २०२१ मा २५ सयमा झरेको छ। त्यस्तै सिरियामा २०१८ मा १७ सय रहेकोमा अहिले ९ सयमा झारेको छ। यो क्रमलाई हेर्दा अमेरिकाले विश्वभरबाट आफ्नो सेनालाई फिर्ता गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। तर, विदेशमा अमेरिकी सेनाको उपस्थिति अझै विशाल मात्रामा छ।
(द कन्भर्सेसनको नेपाली अनुबाद नेपालखबरबाट। माइकल एलेन बोइजी स्टेट युनिभर्सिटीका सहप्राध्यापक हुन् भने कार्ला मार्टिनेज माकिन र माइकल ई फ्लिन कान्जस सिटी युनिभर्सिटीका सहप्राध्यापक हुन्)